I-PPC + yeOrganic = Okuninzi ukucofa Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 30, 2012 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 Douglas Karr
Nangona sisiqwenga sokuzenzela, Uphando lukaGoogle iphuhlise le infographic ukubonelela ubungqina bokuba amaxabiso okucofa atshintsha njani xa isiphumo sokukhangelwa kwezinto eziphilayo sikhatshwa yintengiso yokukhangela ehlawulelweyo. Ukudibanisa ezi zimbini kunokunceda ukuthengisa kwakho kwii-engile ezimbini ezahlukeneyo… ukubonelela ngendawo ethe kratya yokuthengisa izindlu nomhlaba ukucofa kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela. Esinye isizathu, esinokuba sibaluleke ngakumbi, kukususa omnye umntu okhuphisana naye!
tags: uphando lukaGoogleGoogle +Uhlobo lwezinto eziphilayouphando lwezinto eziphilayoukukhangela okuhlawulelweyoHlawula ngokucofa kanyePPCIntengiso ye-ppcinyokainyoka ctrisikhundla se serp
IScoutmob: Iidili zasekhaya zexesha lokwenyani
Epreli 2, 2012 ngo-10: 06 AM
Ngokuqinisekileyo kukho into enokuthethwa ngokuba noluhlu oluhlawulweyo kunye nolwendalo kwiphepha elifanayo leSERP. Okokuqala, kufaneleka undwendwe. Ukuba uphawu lwakho luvela kabini, kufuneka luhambelane neemfuno zomkhangeli. Okwesibini, iphucula amathuba okucofa. Abanye abantu baya kucofa kwintengiso, abanye bajonge iziphumo zezinto eziphilayo. Ukuba ubonisa kuzo zombini utsala zombini iindidi.